ဆူဇူကီးအကွို မွနျမာအသငျးရဲ့ ခွစေမျးပှဲမြား
မွနျမာအသငျးကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးက အိမျရှငျ လုပျခဲ့ပွီး ဆီမီးဖိုငျနယျအထိ တကျလှမျးနိုငျခဲ့ကာ ဒီတဈကွိမျမှာတော့ အနိမျ့ဆုံး ပဈ မှတျက ဗိုလျလုပှဲအထိ တကျလှမျးနိုငျရေးလို့ သိထားရပါတယျ။
Photo - The Straits Times
အာရှအားကစားပှဲတျောအပွီး ဆကျလကျကစားရဖို့ ရှိနတေဲ့ အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားပွိုငျပှဲကတော့ မွနျမာနိုငျငံဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ အတှငျး အဓိက ပဈမှတျထားတဲ့ ပွိုငျပှဲ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာ ယူ-၂၃ အသငျးနဲ့ အောငျသူ ဘယျတော့ ပူးပေါငျးမှာလဲ?
အဓိက ပဈမှတျထားပမေယျ့လညျး ဒီပွိုငျပှဲကို မွနျမာအသငျးအနနေဲ့ အမွငျ့ဆုံး ဆီမီးဖိုငျနယျအထိသာ တကျလှမျးထားဖူးသလို ပွိုငျပှဲ သမိုငျး တဈလြှောကျ ၂ ကွိမျသာ တကျလှမျးထားနိုငျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
Photo - AFF Suzuki Cup
လကျရှိမှာတော့ ဆူဇူကီး ဖလားပွိုငျပှဲကို လာမယျ့ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျနကေ့ ဒီဇငျဘာ ၁၅ ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပွီး ပွိုငျပှဲကငျြးပပုံ ပွောငျးလဲလိုကျလို့ အိမျရှငျ အတိအကြ မရှိတော့ပါဘူး။
အုပျစုပှဲစဉျမြားလညျး ထှကျပျေါနပွေီ ဖွဈပွီး ဒီနှဈမှာတော့ ထူခွားစှာပငျ ၂၀၁၆ အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက အသငျးတှပေငျ အုပျစု တှငျး ပွနျလညျကရြောကျနခေဲ့တာကို တှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Photo - thephuketnews.com
မွနျမာ အုပျစုမှာဆိုရငျ မွနျမာ၊ ဗီယကျနမျ၊ကမ်ဘောဒီးယား၊မလေးရှားတို့ ပွနျလညျကရြောကျနပွေီး ပွောငျးလဲလိုကျတဲ့ စနဈအရ အုပျစုတှငျး ၅ သငျး ဖွဈလာလို့ လာအိုတဈသငျး ထပျမံ ပါဝငျလာပါတယျ။
တဈဖကျအုပျစုမှာဆိုရငျလညျး ထိုငျး၊စငျကာပူ၊အငျဒိုနီးရှား၊ဖိလဈပိုငျနဲ့ ခွစေဈပှဲအောာငျအသငျးတို့ ပါဝငျလာမှာ ဖွဈပွီး ခွစေဈပှဲကိုတော့ ဘရူ နိုငျး၊နဲ့အရှတေီ့မောတို့ လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁ ရကျနဲ့ ၈ ရကျနတှေ့မှော အိမျကှငျး အဝေးကှငျးနှဈပှဲကစားပွီး အနိုငျရတဲ့ အသငျးက လကျ ကနျြတဈနရော ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မွနျမာအသငျးအနနေဲ့ အခုကတညျးက ပွငျဆငျမှုတှေ ပွုလုပျထားနှငျ့ပွီးဖွဈပွီး Alpine Cup 2018 နဲ့ အာရှအားကစားပှဲတျောက လူ စာရငျးတှကေိုလညျး ဆူဇူကီးအတှကျ ရညျရှယျ ရှေးခယျြထားတယျလို့လညျး နညျးပွ အနျတှနျနီဟေးက ပွောထားခဲ့ဖူးပါတယျ။
အဆိုပါ ပွိုငျပှဲမြားအပွီးမှာတော့ လကျရှေးစငျအသငျး စဈစဈကို ထပျမံ ဖှဲ့စညျးကာ ခွစေမျးပှဲမြား ဆကျလကျကစားပွီး ပွငျဆငျသှားအုံးမှာ ဖွဈပွီး ဘယျလိုမြိုးပွငျဆငျသှားဖို့ ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ -" ခွစေမျးပှဲတှကေ စကျတငျဘာမှာ ၂ ပှဲ အောကျတိုဘာမှာ ၂ ပှဲ ဖီဖာ အသိအမှတျပွု ခွစေမျးပှဲတှေ ကစားပါမယျ။ စကျတငျဘာလအတှကျကတော့ ဟောငျကောငျနဲ့ နီပေါအသငျးတှကေို ကမျးလှမျးထားပွီး မသခြောသေးပါဘူး။ အောကျတိုဘာမှာတော့ အငျဒိုနီးရှားနဲ့ အာဖဂနျနစ်စတနျအသငျးတှနေဲ့ ခွစေမျးဖို့ သခြောပါတယျ။" လို့ မွနျမာနိုငျငံဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ဦးကိုကိုသိနျးက ပွောပါတယျ။
ခွစေမျးပှဲကစားဖို့ သခြောထားတဲ့ အငျဒိုနီးရှားနဲ့ ပှဲစဉျကို လာမယျ့ အောကျတိုဘာလ ၉ ရကျနမှေ့ာ အဝေးကှငျးမှာလညျးကောငျး၊ အာဖဂနျနစ်စ တနျ အသငျးနဲ့မူ အောကျတိုဘာ ၁၄ မှာ အိမျကှငျးပှဲအဖွဈ လညျးကောငျး အသီးသီး ကစားဖို့ ရှိနပေါတယျ။
ခွစေမျးပှဲစဉျအပွီးမှာ တဈဆကျတညျးပဲ Joint Training ပုံစံမြိုးနဲ့ တဈလခနျ့ သှားရောကျလကေ့ငျြ့ဖို့ရှိပွီး သှားရောကျလကေ့ငျြ့မယျ့ နိုငျငံကို တောာ့ အတိအကမြသိသေးပါဘူး။
" အဓိကကတော့ ဟိုတယျ ကြှနျတျောတို့ ခွစေမျးကစားရမယျ့ အသငျးတှရေဲ့ ခွစှေမျးအနအေထား ဘယျလောကျရှိတယျ၊ကိုယျ့အသငျး ခွစေမျး လကေ့ငျြ့ခြိနျမှာ အကြိုးဘယျလောကျရနိုငျမယျဆိုတာတှကေို တှကျခကျြပွီး အခု ပွိုငျပှဲတှအေပွီးမှာ နညျးပွအဖှဲ့နဲ့ တိုငျပငျသှားမှာပါ။ ဒါ ကွောငျ့အတိအကမြသိရသေးပါဘူး။" လို့ ဦးကိုကိုသိနျးက ဆကျလကျပွောပါတယျ။
Joint Training ကိုတော့ လကျရှိမှာ အာရှတိုကျတှငျးက World Class အဆငျ့ရှိ နိုငျငံတှကေို စဉျးစားထားတယျလို့ သိရပွီး ဥရောပတိုကျအတှငျး မှ နိုငျငံတှကေိုလညျး ပဈမှတျထားစီစဉျထားသေးတယျလို့ သိရပါတယျ။
မွနျမာ့လကျရှေးစငျအသငျးကို ယခု Alpine Cup 2018 ပွိုငျပှဲဝငျ မွနျမာ ယူ-၂၃ အသငျးကို နညျးပွခြုပျအဖွဈ တာဝနျယူမယျ့ ဂြာမနျလူမြိုး နညျးပွ အနျတှနျနီဟေးက နညျးပွခြုပျအဖွဈ ဆကျလကျတာဝနျယူကိုငျတှယျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဆူဇူကီးမှာတော့ မွနျမာအသငျးက ပွောငျးလဲလိုကျတဲ့စနဈသဈကွောငျ့ ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့ ဗီယကျနမျကို အိမျကှငျးကစားရမှာ ဖွဈပွီး လာအိုနဲ့ မ လေးရှားကိုတော့ အဝေးကှငျးလိုကျကစားရပါမယျ။
ဆီမီးဖိုငျနယျကိုတော့ အိမျကှငျးအဝေးကှငျးနှဈကြော့ ကစားပွီး ဗိုလျလုပှဲကိုလညျး နှဈကြော့စနဈနဲ့သာ ဆကျလကျကစားရပါမယျ။
မြန်မာအသင်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက အိမ်ရှင် လုပ်ခဲ့ပြီး ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ကာ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အနိမ့်ဆုံး ပစ် မှတ်က ဗိုလ်လုပွဲအထိ တက်လှမ်းနိုင်ရေးလို့ သိထားရပါတယ်။
အာရှအားကစားပွဲတော်အပြီး ဆက်လက်ကစားရဖို့ ရှိနေတဲ့ အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အတွင်း အဓိက ပစ်မှတ်ထားတဲ့ ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းနဲ့ အောင်သူ ဘယ်တော့ ပူးပေါင်းမှာလဲ?
အဓိက ပစ်မှတ်ထားပေမယ့်လည်း ဒီပြိုင်ပွဲကို မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆီမီးဖိုင်နယ်အထိသာ တက်လှမ်းထားဖူးသလို ပြိုင်ပွဲ သမိုင်း တစ်လျှောက် ၂ ကြိမ်သာ တက်လှမ်းထားနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ ဆူဇူကီး ဖလားပြိုင်ပွဲကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့က ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကျင်းပပုံ ပြောင်းလဲလိုက်လို့ အိမ်ရှင် အတိအကျ မရှိတော့ပါဘူး။
အုပ်စုပွဲစဉ်များလည်း ထွက်ပေါ်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ ထူခြားစွာပင် ၂၀၁၆ အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက အသင်းတွေပင် အုပ်စု တွင်း ပြန်လည်ကျရောက်နေခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ အုပ်စုမှာဆိုရင် မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊မလေးရှားတို့ ပြန်လည်ကျရောက်နေပြီး ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ စနစ်အရ အုပ်စုတွင်း ၅ သင်း ဖြစ်လာလို့ လာအိုတစ်သင်း ထပ်မံ ပါဝင်လာပါတယ်။
တစ်ဖက်အုပ်စုမှာဆိုရင်လည်း ထိုင်း၊စင်ကာပူ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ခြေစစ်ပွဲအောာင်အသင်းတို့ ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး ခြေစစ်ပွဲကိုတော့ ဘရူ နိုင်း၊နဲ့အရှေ့တီမောတို့ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နဲ့ ၈ ရက်နေ့တွေမှာ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်းနှစ်ပွဲကစားပြီး အနိုင်ရတဲ့ အသင်းက လက် ကျန်တစ်နေရာ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ အခုကတည်းက ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ထားနှင့်ပြီးဖြစ်ပြီး Alpine Cup 2018 နဲ့ အာရှအားကစားပွဲတော်က လူ စာရင်းတွေကိုလည်း ဆူဇူကီးအတွက် ရည်ရွယ် ရွေးချယ်ထားတယ်လို့လည်း နည်းပြ အန်တွန်နီဟေးက ပြောထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲများအပြီးမှာတော့ လက်ရွေးစင်အသင်း စစ်စစ်ကို ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းကာ ခြေစမ်းပွဲများ ဆက်လက်ကစားပြီး ပြင်ဆင်သွားအုံးမှာ ဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်သွားဖို့ ရှိလဲဆိုတာကိုတော့ -" ခြေစမ်းပွဲတွေက စက်တင်ဘာမှာ ၂ ပွဲ အောက်တိုဘာမှာ ၂ ပွဲ ဖီဖာ အသိအမှတ်ပြု ခြေစမ်းပွဲတွေ ကစားပါမယ်။ စက်တင်ဘာလအတွက်ကတော့ ဟောင်ကောင်နဲ့ နီပေါအသင်းတွေကို ကမ်းလှမ်းထားပြီး မသေချာသေးပါဘူး။ အောက်တိုဘာမှာတော့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်အသင်းတွေနဲ့ ခြေစမ်းဖို့ သေချာပါတယ်။" လို့ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုသိန်းက ပြောပါတယ်။
ခြေစမ်းပွဲကစားဖို့ သေချာထားတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ပွဲစဉ်ကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့မှာ အဝေးကွင်းမှာလည်းကောင်း၊ အာဖဂန်နစ္စ တန် အသင်းနဲ့မူ အောက်တိုဘာ ၁၄ မှာ အိမ်ကွင်းပွဲအဖြစ် လည်းကောင်း အသီးသီး ကစားဖို့ ရှိနေပါတယ်။
ခြေစမ်းပွဲစဉ်အပြီးမှာ တစ်ဆက်တည်းပဲ Joint Training ပုံစံမျိုးနဲ့ တစ်လခန့် သွားရောက်လေ့ကျင့်ဖို့ရှိပြီး သွားရောက်လေ့ကျင့်မယ့် နိုင်ငံကို တောာ့ အတိအကျမသိသေးပါဘူး။
" အဓိကကတော့ ဟိုတယ် ကျွန်တော်တို့ ခြေစမ်းကစားရမယ့် အသင်းတွေရဲ့ ခြေစွမ်းအနေအထား ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ကိုယ့်အသင်း ခြေစမ်း လေ့ကျင့်ချိန်မှာ အကျိုးဘယ်လောက်ရနိုင်မယ်ဆိုတာတွေကို တွက်ချက်ပြီး အခု ပြိုင်ပွဲတွေအပြီးမှာ နည်းပြအဖွဲ့နဲ့ တိုင်ပင်သွားမှာပါ။ ဒါ ကြောင့်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။" လို့ ဦးကိုကိုသိန်းက ဆက်လက်ပြောပါတယ်။
Joint Training ကိုတော့ လက်ရှိမှာ အာရှတိုက်တွင်းက World Class အဆင့်ရှိ နိုင်ငံတွေကို စဉ်းစားထားတယ်လို့ သိရပြီး ဥရောပတိုက်အတွင်း မှ နိုင်ငံတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားစီစဉ်ထားသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းကို ယခု Alpine Cup 2018 ပြိုင်ပွဲဝင် မြန်မာ ယူ-၂၃ အသင်းကို နည်းပြချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူမယ့် ဂျာမန်လူမျိုး နည်းပြ အန်တွန်နီဟေးက နည်းပြချုပ်အဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူကိုင်တွယ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆူဇူကီးမှာတော့ မြန်မာအသင်းက ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့စနစ်သစ်ကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်ကို အိမ်ကွင်းကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး လာအိုနဲ့ မ လေးရှားကိုတော့ အဝေးကွင်းလိုက်ကစားရပါမယ်။
ဆီမီးဖိုင်နယ်ကိုတော့ အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်းနှစ်ကျော့ ကစားပြီး ဗိုလ်လုပွဲကိုလည်း နှစ်ကျော့စနစ်နဲ့သာ ဆက်လက်ကစားရပါမယ်။